Ngabe uShih Tzu Pomeranian othandekayo uhlanganisa isilwane esifanele wena? - Izinhlobo
Ngabe uShih Tzu Pomeranian othandekayo uhlanganisa isilwane esifanele wena?
Hlangana nomxube omncane, ozinikele futhi othokozisa ngokuphelele uShih Tzu Pomeranian.
Lezi izinja zomklami zihlukanisiwe phakathi kwe- Ithoyizi le-AKC okumsulwa Shih Tzu futhi Isi-Pomeranian . Baziwa nangokuthi amaSiraniani, iPom-Tzus, iShih A Poms, iPomshi, neShih-Poms.
Hlangana neCookie, inhlanganisela yeShih Tzu Pomeranian ehleli kupavumente - Umthombo wesithombe
Ingabe ufuna uhlobo lwezinja oluncane olwaziwa ngesiqu salo esincane, ukubukeka kwalo okufana nengonyama, nobuntu balo obuhle? Uma kunjalo, uhlobo oluhlanganisiwe lwePomeranian Shih Tzu kungaba yinja enhle kakhulu kuwe!
Uvelaphi uhlobo lweShih Tzu Pomeranian?
Ngabe ubukeka kanjani uShiranian?
Isimo sokuxubana kweShih Tzu Pomeranian
Ungayinakekela kanjani inja yakho yaseSiraniani
Ingabe Izinja Eziphilile ZikaSiraniani?
Izobiza malini iShih Tzu Pomeranian mix puppy?
Amanye amaMixes weShih Tzu
Ngabe iPomeranian Shih Tzu Ihlanganisela inja yakho?
Umlando wezinhlobo zezinja zaseSiraniani awaziwa kakhulu. Lokhu i-hybrid inja yavela e-United States ngasekupheleni kweminyaka yama-1990, njengomphumela wokuzalisa iShih Tzu yaseShayina (noma iShitzu) nePomeranian yaseJalimane.
Kokubili iShih Tzu kanye nePomeranian babethandwa yimindeni yasebukhosini yezwe labo. IShih Tzus bangabathakazeli abanothando abazalelwe ukuba semathangeni okunethezeka.
Kunobunye ubufakazi bokuthi lezi zinja zazalwa yizindela zaseTibet njengezipho kubabusi baseChina.
Inja yasePomeranian iyamamatheka ihleli otshanini
AmaPomeranians amancane kunawo wonke ohlobo lweSpitz (okhuliswe njengezinja ezidonsa ngesihlibhi), kepha ubuntu babo obukhulu kanye nobukhazikhazi babenza baba yintandokazi yeNdlovukazi uVictoria. Waba ngumfuyi osemthethweni, futhi le midlwane yathandwa kusukela lapho.
Ngakho-ke noma ngabe imvelaphi yangempela yeShyiranian eyingxube ayaziwa, ungaqiniseka ukuthi bathola umusa wasebukhosini!
Inja ye-Shih Tzu egijima otshanini ehlobo, izinwele ezindiza emoyeni
IShih Tzu’s yaziwa ngokuba nothando futhi inenkani, kanti abasePomeranian banobungane futhi bahlakaniphile.
Amazinyane we-Shiranian azodla ifa lezimpawu kubo bobabili abazali, ngakho-ke uqinisekile ukuthola inja encane enobuntu obukhulu.
Shih Tzu Pomeranians kukhona i-hybrid noma izinja ezinqamulelayo, ngakho-ke azaziwa yi I-American Kennel Club (AKC), eyezinja ezihlanzekile kuphela. Kodwa-ke, abaseSiraniani babonwa yila maqembu alandelayo:
I-American Canine Hybrid Club
I-Designer Dogs Kennel Club
Mina Umklami we-nternational Canine Registry
I-Registry Breed Registry
Inja Registry of America, Inc.
IShih Tzu Pomeranians bazodla ifa lenhlanganisela yezici ezahlukahlukene ezivela kubazali babo, ngakho-ke ngokungafani nezinja ezihlanzekile, ukubukeka kwazo kuzohluka kuye ngomntwana. Lolu hlobo lwamathoyizi luzohlala lincane futhi luhlangene.
Amehlo abo amakhulu ansundu, izindlebe ezingunxantathu, izifinyana ezimfushane, nezindwangu ezigelezayo kuzenza zifane namabhubesi amancane.
Bukela le midlwane ethandekayo yaseSiraniani idlala ndawonye!
Umxube weShih Tzu Pomeranian uzoba mkhulu kangakanani?
USiranian uzofinyelela usayizi wabo omdala ngezinyanga eziyi-9 kuye kwezingu-10. IPom-Tzus ekhule ngokugcwele izoba njalo Amasentimitha angu-7 kuya kwayi-12 (18 to 30.5 cm) ubude futhi unesisindo phakathi 4 kuya ku-16 amakhilogremu (2 kuya ku-7 kg). Usayizi wazo ohlangene ubenza balungele abahlala emafulethini.
Amade, amajazi kanokusho
Izingxube zeShih Tzu Pomeranian zizozuza njengefa isikhathi eside, esichichimayo ijazi elikabili . Amajazi abo angahle aqonde noma ajabhise kancane. Imibala yabo yejazi izosukela kokumnyama, ukushuna, okumhlophe, okusawolintshi, onsundu, ukubopha, ukuhlangana kanye nesable.
Ama-Shiranian angaba nombala oqinile, kepha imvamisa iyiphethini enemibala enemibala noma enemibala emithathu.
Hlangana noBambi, iPom-tzu elungele ukuzilungisa nokugeza - Umthombo wesithombe
Umxube wePomeranian Shih Tzu uzoba nawo ukuchitheka okuncane kuya kokulingene . Kodwa-ke, amajazi amade awachitheki nsuku zonke noma njengezinja ezimfishane, ezifakwe bushelelezi.
Uma ubheka ukugcina ikhaya lakho lingenabala, lokhu kungenzeka kungabi yinja ekufanele.
Isici sokuthimula: Achoo!
Ngokungafani ne- Izinja zikaShih Tzu , uShiranian wakho akaziwa ukuthi ungubani hypoallergenic . Bazokhipha kancane baphathe i-dander.
Ijazi labo elide liyazenza Ngaphansi i-allergenic kunezinye izinhlobo, kepha uma uqinisekile ukuthi unezinto ezingezwani nokwaliwa yizinja, kufanele ucabangele uhlobo oluhlukile.
Iqiniso lebhonasi: abanalo ukuvuza amanzi ! Ngakho-ke ngenkathi kungadingeka ukuthi usebenzise i-vacuum, ngeke kudingeke uhlanze i-slobber.
Hlangana noKoko Deelyte, uShih A Poms owenza isifiso emthonjeni - Umthombo wesithombe
Uzojabula ngabathandekayo ubuntu wabakwaSiranii.
Gcina ukhumbula ukuthi lezi yizinkolelo zomphakathi eziphumelelayo ubungane . Bayohlala eceleni kwakho noma nini lapho kungenzeka khona futhi bangathola ukukhathazeka ngokwehlukana uma kushiywe bodwa.
Izinja zomndeni zenhlalo
IPom-Tzus yizinja zomndeni futhi zizokwenza kahle nezingane ezincane. Izingane ezincane zingadinga ukugadwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi umdlwane omncane awuphathwa ngendlela enolaka kakhulu.
Vele uqinisekise ukuthi wonke amalungu omndeni aqaphele lo mdlwane osayizi wepinti ongathola kalula ngaphansi kwezinyawo.
Ekuqaleni umphakathi kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi lezi zinjana zizohambisana nezinye izilwane ezifuywayo. Amakhaya anezinkukhu ezithile alungile uma usebenza ngaphandle kwekhaya. Ngaleyo ndlela, lezi zimfundaze eziswele zizoba nomngani ozombamba.
Izinja zamathanga amakhulu
Njengoba iPomeranian Shih Tzus idinga ubungani njalo, benza izilwane ezifuywayo ezihle kakhulu kumuntu omkhulu ozimisele ukuchitha amahora ekhaya nomdlwane emathangeni abo. Lezi zinja ezinikele zizokuthanda ukuba ngumthunzi wakho.
Akuyona i-watchdog ekahle
Abashirani akuvamile ukukhonkotha futhi ungenzi abalindi abahle. Bathanda wonke umuntu, okubandakanya noma ngubani ongangenayo! Umdlwane wakho uzobe ezama ukubambelela ethangeni lomphangi ngaphambi kokukuxwayisa ngobukhona babo!
Ukuqeqeshwa: Ukujabulisa abantu abaphikelelayo
IShih Tzu Pomeranians yizinja ezihlakaniphile okulula ukuziqeqesha ngokulingene. Bangaba nefayela le- inenkani streak, kanjalo ukuqinisa okuhle kuyadingeka ukugcina lezi zinja zikulayini.
Bazimisele ukujabulisa umnikazi wabo, ngakho-ke bekezela futhi ukuqeqeshwa kuzoba yimpumelelo!
Ukuqeqeshwa kwamanzi kufanele kube lula. Mane ukhumbule ukuthi ama-pups amancane adinga amakhefu amaningi. Ukudumisa nokuqinisa kahle kuzoholela ekuqeqeshweni kwendlu okusheshayo.
Izingxube zeShih Tzu Pomeranian ziyizinja zokulungisa ezilinganiselwe ezinobukhulu bazo obuzenza zifaneleke emakhaya nasemafulethini amancane.
Gcina iPomshi yakho ibukeka ihlanzekile njalo ngenyanga ukugeza futhi nsuku zonke ukuxubha . Xubha amazinyo akho ePom-tzu nsuku zonke.
Hlola izindlebe zabo bese uzigcina zihlanzekile ukugwema ukutheleleka. Nquma izipikili kanye noma kabili ngenyanga (noma nganoma isiphi isikhathi lapho uzwa ukuchofozwa kokuchofoza phansi).
AmaSiraniani awakhelwanga isimo sezulu esibi kakhulu. Zigcine endlini ngezinsuku ezishisa ngokweqile futhi ucabangele ijezi ngezinsuku ezibandayo zasebusika.
IPom-Tzus inezinga lamandla alinganiselayo, kepha njengoba izinja ezincane, zizodinga kuphela ukuhamba okukodwa noma okubili okufushane ngosuku. Lwela i- Umsebenzi wemizuzu engama-30 .
Bazophinde bajabulele isikhathi sokudlala sansuku zonke ngamathoyizi asebenzisanayo noma ancibilikayo ukuze bahlale bematasa.
Lona nguTucker, waseSiraniani ojabulela ukuhamba kwezinja zakhe - Umthombo wesithombe
Ngabe amaSiraniani adinga ukulungiswa?
Ukusungula inqubo ejwayelekile yokuzilungisa kuzonciphisa ukuchitheka futhi kugcine i-pup yakho ithambile futhi iphilile.
Amajazi amade, adingekayo kufanele alungiswe kaningi ukugwema izingxabano namata, okwenza lezi zinja zizinakekele kakhulu maqondana nokudinga ukubona umkhwenyana njalo izinyanga ezintathu .
Futhi, ukuzilungisa kungagcina inja yakho ibukeka 'isencane naphakade' ngokunqunywa okuhle, okuyindilinga komdlwane.
Izinja ezincane ezinjengamaSiraniani zidinga kuphela ½ 1 inkomishi yokudla kwenja eyomile ngosuku. Khetha inhlanganisela elungele izinja ezincane ezizalanayo ezinamandla alinganiselayo.
Xhumana nodokotela wezilwane ukuthola izincomo ngokuhlanganiswa kwekhwalithi engcono kakhulu ye-kibble yePom-Tzu yakho.
Namathela ekudleni okunempilo ngokuphathwa okuncane njengoba lezi zintshontsho zithambekele ekutholeni isisindo kalula.
Njengama-crossbreeds amaningi, iShih Tzu Pomeranian ngokuvamile ibhekwa njengenja enempilo. AbaseSiraniani bangathola ifa lezinkinga ezithile zezempilo kumzali wabo wasePomeranian noma uShih Tzu, ngakho-ke ukuhlolwa njalo kwezilwane kubalulekile.
Izingqinamba ezingaba khona zezempilo okufanele uzibheke eShiranian yakho zifaka:
I-hip dysplasia (lapho isokhethi lesinqe likhula ngokungajwayelekile)
I-cataract (isifo samehlo esingadala ubumpumputhe)
I-Hypoglycemia (ushukela ophansi wegazi)
I-Hypothyroidism (i-thyroid ayikhiqizi ama-hormone afanele)
AmaSiraniani ngokuvamile ayizinja ezinempilo enempilo elindelwe yokuphila Iminyaka engu-12 kuya kwengu-16 .
Hlangana neBucky, umdlwane omuhle wePomshi - Umthombo wesithombe
Lezi zingoma ezidlalayo zizohluka ngamanani ngokwebala lawo futhi uma abazali bazo bebekwiqophelo lobuphiko. Isilinganiso Intengo yi- $ 750 , yize lo mngani opholile angabiza kuze kufike ku- $ 1500.
Izinhlobo zamathoyizi zinodoti abancane (isilinganiso semidlwane engu-1 kuye ku-4), okungakhuphula izindleko zomdlwane weShih Tzu Pom. Uzothola i-F1 (Shih Tzu nabazali basePomeranian) noma i-F2 (abazali ababili baseSiranian) ezahlukahluka ezinikezwa ngu abalimi .
Yenza ucwaningo lwakho! Thola umfuyi osemthethweni ozokukhombisa abazali bese ephendula imibuzo yakho.
Umdlwane wakho kufanele uhlolwe ngudokotela wezilwane futhi ube nokugonywa kwawo kokuqala ngaphambi kokuza ekhaya kuwe.
Ukutakulwa Kwakwa Shiranian
Ukwamukela i-Shiranian kuhlale kungumqondo omuhle! Ngokudabukisayo, izinja eziklama kwesinye isikhathi zigcina sezikhosele.
Xhumana nendawo yokukhosela yangakini bese ubuza ukuthi ngabe banenhlanganisela yeShih Tzu Pomeranian edinga ikhaya laphakade. Noma, cabanga nge Shih Tzu ukutakula noma Ukutakulwa kwePomeranian ukuthola umdlalo wakho ofanele.
IShih Tzus namaFurbabies
Uma ungayitholi iPom-Tzu endaweni yokukhosela, futhi inhliziyo yakho isethelwe ekwamukelweni, cabanga ngalezi ezinye izingxube zeShih Tzu eziqinisekile ukuncibilikisa inhliziyo yakho!
Uma ufuna umngane othembekile ongasoze ashiya uhlangothi lwakho, muhle emakhaya amancane, futhi udinga ukuzivocavoca umzimba okuncane, cabanga ukwamukela iSiranian.
Lezi zinqwaba zothando ziqinisekile ukukhanyisa usuku lwakho!
Lo nguMyko, umdlwane weShi-Poms ojabulela iholide - Umthombo wesithombe
Ubuntu obunobuntu obudlalayo
Inobuhlakani futhi iyaqeqeshwa
Ukuvivinya umzimba okuncane kuyadingeka
Ukukhonkotha okungapheli (okulungele indawo yokuhlala)
Zimbalwa izingqinamba zezempilo
Ilungele imindeni enezinye izilwane ezifuywayo
Ilungele abantu abadala abadinga inja ethandekayo
Abaswele futhi bathambekele ekukhathazekeni ngokwehlukana
Akuyona inogada enhle
Izidingo zokugadwa ezungeze izingane ezincane (ngenxa yosayizi wazo obucayi)
Ngabe unakho okudingekayo ukuze ube ngumnikazi walo mntwana ototoswayo? Ucabangani ngengxube ethandekayo yeShih Tzu Pomeranian? Beka amazwana ngezansi.
Amaqiniso ayi-12 Abanikazi Abasha Abasha Kumele Bazi Nge-Pug!
Inja ye-Chug: Kunjani Ukuba Nomxube we-Chihuahua Pug
amagama amahle wezinja zomfana omncane
bakhula kangakanani abelusi abancane base-Australia
shih tzu chihuahua mix umdlwane
ijakhethi namabhulukwe kusikekile
inja yami ilokhu ikhwehlela futhi izama ukuphonsa